सङ अफ द् इयर बन्ला ‘शुभ लभ’को गीत ? « Ramailo छ
सङ अफ द् इयर बन्ला ‘शुभ लभ’को गीत ?
समय : 3:57 pm
दर्शकलाई हलसम्म आकर्षण गर्न फिल्ममा समावेश गीत संगीतको महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ । यसैले मेकर्स निकै मिहेनत गरेर फिल्ममा गीत संगीत राख्ने गर्ने गर्दछन् ।
फिल्म ‘शुभ लभ’को शिर्ष गीत ‘तिमी हुन्छौ भने मेरो शुभ लभ’ यही माघ ९ गते रिलिज हुँदैछ । निर्माण टिमले यसको दिनगन्ती सुरु गरिसकेको छ । ‘फकाउने सङ अफ द् इयर’ भन्दै निर्माण टिमले फेसबुकमा पोस्टर सेयर गरिरहेको छ । गीतमा युवा ज्योतिष हरिहर अधिकारी र क्रिस्टिन पौडेलले प्रस्तुत छन् । ‘शुभ लभ’ दुवैले खेलेको पहिलो फिल्म हो ।
धेरैको भविष्यवाणी गरेका युवा ज्योतिष अधिकारी आफैले खेलेको गीतको भविष्य चाहिं के होला त ? काउन्टडाउन पोस्टरमा लेखे जस्तै शुभ लभको गीत वर्षको ब्लकबस्टर गीत बन्ला त ? समय बाँकी छ । गीतमा नेपाल आइडलका फस्ट रनरअप निशान भटराईले स्वर दिएका छन् । शब्द तथा संगीत अर्जुन पोखरेलको छ भने कोरियोग्राफी रामजी लामिछानेको रहेको छ । फिल्मको ड्रेस रोविन क्रियशनका लागि रोविन परियारले गरेका हुन् ।
सन्तोषबाबु लोहनीले निर्देशन गरेको फिल्ममा हरिहर र क्रिस्टिनसंगै सरोज खनाल, प्रदीप बाँस्तोला, रवीन्द्र झा, राजाराम पौडेल, डा.सूर्या थापा लगायत कलाकारको अभिनय रहेको छ । धर्मराज सुवेदीको लगानी रहेको फिल्म चैत्र १५ गते रिलिज हुँदैछ ।